Manchester United oo u dhaqaaqaysa soo xero gelinta xiddig ka tirsan Bayern Munich haddii ay ku guuldarreystaan saxiixa Jadon Sancho – Gool FM
Manchester United oo u dhaqaaqaysa soo xero gelinta xiddig ka tirsan Bayern Munich haddii ay ku guuldarreystaan saxiixa Jadon Sancho
(Manchester) 14 Sebt 2020. Kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa la soo warinayaa inay u dhaqaaqayso soo xero gelinta xiddig ka tirsan naadiga Bayern Munich, haddii ay ku guuldarreystaan saxiixa Jadon Sancho oo ay si weyn u doonayso.
Red Devils waxaa la soo sheegayaa inay xiiseynayso oo ay taageero u tahay xiddiga reer Croatia ee Ivan Perisic.
Manchester United ayaa muujinaysa xiisaha ay u qabto weeraryahanka Inter Milan ee Ivan Perisic, iyagoo raadinaya inay helaan bedel Jadon Sancho, sida ay daabacday Jariiradda Telegraph.
Red Devils ayaa sida warbixinta lagu sheegay luminaysa rajadii ay ka lahayd inay heshiis la gaarto kooxda Dortmund, kaasoo ku aaddan saxiixa Sancho, waxayna haatan raadinayaan fursado kale.
Perisic ayaa noqday magac cusub ee ay Man United ka fiirsanayso inay la soo wareegto haddii ay ku hungoobaan saxiixa Jadon Sancho, iyadoo xiddiga reer Croatia uu xilli ciyaareedkii hore amaah kula joogay Kooxda Bayern Munich ee ka dhisan Waddanka Jarmalka.
Kooxda Arsenal oo la shaaciyey qiimaha ay ku iibinayso Lucas Torreira
Goorma ayay Kooxda Barcelona soo bandhigi doontaa saxiixeeda cusub ee Miralem Pjanic??